Umbutho we-World Steel Association: uqikelelo lweemfuno zentsimbi yehlabathi ukuba lukhule nge-5.8% ngo-2021 - China Foshan Hermes Steel
Umbutho weWorld Steel: uqikelelo lwebango lesinyithi lwehlabathi ukuba lukhule nge-5.8% ngo-2021
I-China-Singapore Jingwei Client, Epreli 15th. Ngokwewebhusayithi esemthethweni ye-World Steel Association, uMbutho we-World Steel Association ukhuphe ingxelo yakutshanje yexesha elifutshane (2021-2022) yengxelo yemfuno yesinyithi ngomhla we-15. Ingxelo ibonisa ukuba ibango lesinyithi lehlabathi liyakwehla kwi-2020 Emva kwe-0.2%, iya kunyuka nge-5.8% ngo-2021, ifikelele kwi-1.874 yezigidi zeetoni. Kwi-2022, ibango lesinyithi lehlabathi liya kuqhubeka nokukhula nge-2.7%, ukuya kwi-1.925 yezigidi zeetoni.
Ingxelo ikholelwa ekubeni umjikelo oqhubekayo wesibini okanye wesithathu wobhubhane uyakuthamba kwikota yesibini yalo nyaka. Ngenkqubela phambili eqinisekileyo yokugonya, imisebenzi yezoqoqosho kumazwe amakhulu asebenzisa intsimbi iya kubuyela esiqhelweni ngokuthe ngcembe.
U-Al Remeithi, uSihlalo weKomiti yoPhando yeNtengiso yeHlabathi ye-Steel Steel, uphawule ngeziphumo zolu qikelelo: “Nangona esi sifo sithsumayo sisizisa intlekele kubomi nakubomi babantu, ishishini lesinyithi lehlabathi lisenethamsanqa. Ukuphela kwe-2020 yeemfuno zentsimbi yeLizwe sele ingene kancinane. Oku ikakhulu kubangelwe kukuchacha okumangalisayo kweTshayina, okuthe kwaqhuba imfuno yentsimbi yase China ukuba ikhule nge-9.1%, ngelixa kwamanye amazwe emhlabeni, imfuno yentsimbi yehle nge-10.0%. Kule minyaka imbalwa izayo, uqoqosho oluphambili Imfuno yentsimbi kuqoqosho olusaphuhlayo iya kuphinda inyuke. Izinto ezixhasayo luxinzelelo lwentsimbi kunye nesicwangciso sikarhulumente sokubuyisela uqoqosho. Nangona kunjalo, kolunye uqoqosho oluphucukileyo, kufuneka lubuyele kwinqanaba ngaphambi kobhubhane. Kuya kuthatha iminyaka eliqela.
Ethetha ngomzi mveliso wokwakha kushishino lwentsimbi, ingxelo ithe ngenxa yalo bhubhani, iindlela zophuhliso ezahlukileyo ziya kuvela kumacandelo ahlukeneyo eshishini lokwakha. Ngokunyuka kwetelecommunication kunye ne-e-commerce, kunye nokwehla kohambo lweshishini, ibango labantu kwizakhiwo zorhwebo kunye nezixhobo zokuhamba ziya kuqhubeka ukwehla. Kwangelo xesha, ibango labantu lokuthengwa kwe-e-commerce likhulile, kwaye eli bango liya kukhula libe licandelo elikhulayo. Ukubaluleka kweeprojekthi zeziseko zophuhliso kunyukile, kwaye ngamanye amaxesha ziye zaba yindlela ekuphela kwayo kumazwe amaninzi okufumana kwakhona uqoqosho lwazo. Kuqoqosho olusakhulayo, iiprojekthi zeziseko zophuhliso ziya kuqhubeka ukwenza umba wokuqhuba onamandla. Kuqoqosho oluphambili, iiprojekthi zesicwangciso sokubuyisela kwimeko yesiqhelo kunye neeprojekthi zohlaziyo lwezixhobo ziya kuqhuba ibango kwishishini lokwakha. Kuqikelelwa ukuba ngo-2022, ishishini lokwakha lehlabathi liza kubuyela kwinqanaba le-2019.
Ingxelo ikwathi kwinqanaba lehlabathi, kumzi-mveliso wentsimbi, ishishini leemoto lifumene ukwehla okukhulu, kwaye kulindeleke ukuba ishishini leemoto lifumane ukubuyela kwimeko yesiqhelo ngo-2021. inqanaba lowama-2019 ngowama-2022. Nangona ishishini loomatshini behlabathi liye lahlaselwa kukuhla kotyalo-mali ngo-2020, ukuhla kwehle kakhulu kunaku-2009. Ishishini loomatshini kulindeleke ukuba libuye ngokukhawuleza. Ukongeza, kukho enye into ebalulekileyo eya kuthi ichaphazele noomatshini, oko kukuthi, ukukhawuleziswa kokufakwa kwedijithali kunye nokuzenzekelayo. Utyalomali kule ndawo luyakukhuthaza ukukhula kweshishini loomatshini. Ngapha koko, iiprojekthi eziluhlaza kunye nezicwangciso zotyalo-mali kwicandelo lamandla ahlaziyiweyo ziya kuba yenye indawo yokukhula kwishishini loomatshini. (Umthombo: Sino-Singapore Jingwei)
Ipleyiti yesinyithi engenanto ye-Stainless Sheet